Naya Post Nepal | जहाजबाट यसरि अप’राधि ल्यायो प्र’ह’रीले ! १६ वर्ष पछि यो उमेरमा स’मात्ति’ए ( भिडियो सहित )
जहाजबाट यसरि अप’राधि ल्यायो प्र’ह’रीले ! १६ वर्ष पछि यो उमेरमा स’मात्ति’ए ( भिडियो सहित )
नेपाल प्र’हरीले घ’ट’ना भएको १५ वर्षपछि एक जना ह”त्याका आ ‘रोपी’लाई बहराइनबाट प’क्रा’उ गरेको छ । प’क्राउ पर्नेमा कास्की लेखनाथ सातमुहाने ठे’गाना भएका ४६ वर्षीय अशोक गुरूङ छन् । कास्की जिल्लाको लेखनाथमा मजदुरी काम गरी बस्ने सुनसरी धरा न घर भएका
२० वर्षीय रोजन राईको ह”त्या भएको घ’टनामा उनी सं’लग्न रहेको प्र’हरीले ज’नाएको छ । २०६३ बैशाख २९ गते बेलुकी कु’टपिटबाट सख्त घा’इते भएका रोजन राईको उपचारको क्रममा २०६३ जेठ २ गते मृ”त्यु भएको थियो ।
घ’टनामा सं’लग्न अशोक गुरुङ घ’टनाप’श्चात वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा बहराईन गएका थिए । त्यसपछि उनी’वि’रुद्ध अन्तर्रा ष्ट्रियस्तरमा खोजतलास एवं प’क्राउ’को लागि जिल्ला प्र’हरी कार्या लय कास्कीको अनु’रोधमा २०७८ मंसिर २७ गते ईन्टरपोल
महासचिवालयबाट ‘रेड नोटिस’ जारी गरिएको थियो । उनलाई बहराईनमा प”क्राउ गरिएको हो । उनलाई सम्बन्धित कसूरमा कार’वाही गर्ने प्रयोजनार्थ प्र’हरी प्रधान कार्यालय इन्टरपोल शा खाबाट ख’टिएको प्र’हरीले मंगलबार नेपाल ल्याएको हो ।
गुरूङलाई थप अनुसन्धान तथा आवश्यक कानुनी कारवाहीको ला गि जिल्ला प्रह’री कार्यालय कास्कीलाई बुझाइने इन्टरपोल उक्त शा खाले जनाएको छ । पुरा जानकारीको लागि भिडियो हेरेर थाहा पा उनुहोस,
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का महा’सचिव नेत्र’वि क्रम चन्द ‘विप्लव’ले सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले’ले सं सद्‌’बाट देश लाई बेचे’को आरोप लगाए’का छन्।
एमसिसी अनु’दान नभए’को भन्दै उनले नेपाल’को क्रान्ति’कारी आ न्दोलन लाई सिध्याउ’ने षड्‌यन्त्र भए’को टिप्प’णी गरेका छन्। ‘यो साम्रा’ज्यवाद’को नमुना हो ।
५० अर्ब उठाउनु’को सट्टा ५५ अर्ब’को एमसिसी संसद्‌’बाट अनुमो ’दन गरेको भन्दै उन’ले आक्रोश व्यक्त गरे। एमसिसी कुनै पनि हा लत’मा कार्यान्वयन नहुने उनले स्पष्ट पारेका छन्। टिभी अन्नपूर्ण बाट
२०७८ फाल्गुन २७, शुक्रबार प्रकाशित 1 Minute 250 Views